Dhawaan soo socda: Shaqaynta Washington ee deeqaha loogu talagalay ganacsiyada ay saameysay xiritaanka xadka Mareykanka iyo Kanada - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Dhawaan soo socda: Shaqaynta Washington waxay bixisaa deeqo ganacsi oo saamayn ku leh xiritaanka xadka Mareykanka iyo Kanada
OLYMPIA, WA-Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa ku dhawaaqday barnaamij deeq cusub oo bilaabi doona Oktoobar 4 si loo caawiyo qaar ka mid ah meheradaha yaryar ee waxyeelladu ka soo gaarto xiritaanka xadka Mareykanka iyo Canada. Xadka ayaa u xirnaa inta badan dadka safarka ah tan iyo bishii Marso 2020 sababtuna tahay masiibada COVID-19.
Deeqaha Washington ee Shaqaynaya: Barnaamijka Gargaarka Ganacsiga Xudduudka wuxuu diiradda saari doonaa meheradaha soo wajaha macaamiisha kuwaas oo la kulmay dhibaato gaar ahaan ka dhalatay xayiraadaha xadka COVID-19. Ganacsatadu waa inay u soo sheegaan dakhli sanadeedka $ 5 milyan ama ka yar sanadka 2019 Waaxda Dakhliga oo ku yaal Clallam, Jefferson, San Juan, Island, Skagit, Whatcom, Okanogan, Ferry, Stevens ama Pend Oreille.
Macluumaadka iyo horudhaca arjiga ayaa hadda laga heli karaa commercegrants.com. Xariirka arjiga wuxuu furan yahay Oktoobar 4 - 18. Taageerada macmiilka waxaa lagu heli doonaa Ingiriis iyo Isbaanish laga bilaabo Sebtember 29.
“Ganacsiyada ku tiirsan booqdayaasha soo galaya ama ka imanaya Kanada, xidhitaankani aad buu ugu adkaa. Barnaamijkan deeqda ah waa hal dariiqo oo aan ku caawin karno ganacsiyada yar yar inay iska xirtaan ilaa saraakiisha Mareykanka iyo Kanada ay ka gaaraan heshiis ku saabsan dib -u -furitaanka, ”ayuu yiri. Gudoomiye Jay Inslee. Bishii Luulyo, Inslee booqday meheradaha ku yaal Point Roberts, oo ah magaalo yar oo ku taal xuduudda taas oo asal ahaan go'doon ku ahayd xidhitaanka.
Deeqaha waxay noqon doonaan ilaa $ 50,000 waxayna tixgelin doonaan in meheraddu heshay deeqdii Washington ee hore.
Barnaamijkan deeqda ah ee la beegsaday wuxuu mudnaan siin doonaa ganacsiyada buuxiya hal ama in ka badan oo ka mid ah shuruudaha soo socda:
Ganacsiyada soo wajahay macmiilka oo u baahan is-dhexgal toos ah oo qof ahaaneed oo lala yeesho macaamiisha qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah dukaanka tafaariiqda ama saloon cidiyaha.
Meheradaha ku yaal meel 20 mayl u jirta isgoyska xadka Kanada ama dekedda.
Qaybaha warshadaha ayaa saamaynta ugu badan ku yeeshay xidhitaanka, oo ay ka mid tahay laakiin aan ku xaddidnayn, tafaariiqda, dalxiiska, martigalinta, madadaalada iyo maaweelada.
Baaxadda meheradda (oo lagu qiyaaso dakhliga 2019)
Dakhli lumay intii u dhaxaysay 2019 iyo 2020 iyo/ama kharashyo lagu daray si loo joogteeyo hawlgallada nabdoon
Ganacsiyada ka shaqeeya miyiga ama bulshada dakhligoodu hooseeyo iyo/ama uu leeyahay qof ka soo jeeda dad aan taariikh ahaan liidin (dadka laga tirada badan yahay, halyeeyga, LGBTQ+ ama haweenku leeyihiin).
Ganacsiga, oo maamulay ku dhawaad dhowr iyo toban barnaamijyo ganacsi iyo kuwo aan macaash doon ahayn ilaa maanta, ayaa sidoo kale ka shaqayn doona wareeg cusub, oo weyn oo ah deeqaha ganacsiga Washington ee shaqeeya oo ay maalgeliyaan sharci -dejinta gobolku kalfadhiga 2021 -ka. Barnaamijkaasi waxay u badan tahay inuu bilaaban doono jiilaalkaan.
Lisa Brown, oo ah agaasimaha Waaxda Ganacsiga ayaa tiri "Waxaan ka mahadcelineynaa taageerada guddoomiyaha iyo sharci-dajiyayaasha dadaalladeenna badan ee aan ku taageerayno bulshooyinka si aan kala sooc lahayn u saameysay COVID-19," “In kasta oo soo kabashada ay si wanaagsan ugu socoto ganacsiyada qaarkood, qaar badan ayaa weli la kulma caqabado adag. Aad bay u siman tahay waqtigan. Soo kabasho xoog leh, oo loo siman yahay waxay nooga baahan tahay inaan diirada saarno kuwa weli wajahaya caqabadaha inay cagahooda dib ugu noqdaan. ”
horumarinta dhaqaalahadeeqoWar-saxaafadeedWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Ka Yar Qalab Dila Soo bandhigida Jodi Honeysett, Maamulaha Qaybta Cusub ee Barnaamijka Rabshadaha ka dhanka ah Haweenka (VAWA) ee OCVA →